ကြက်ခြေထောက် တုံယမ်းဟင်းချို | Wutyee Food House
ဟင်းလျာ-၁၀၀ပြည့် အထိမ်းအမှတ် ”ကြက်သားတို့ဟူး မြေအိုးဟင်း” »
October 12, 2010 by chowutyee ကြက်ခြေထောက် တုံယမ်းဟင်းချို (၈ယောက်စာ)
ဒီ ကြက်ခြေထောက် တုံယမ်းဟင်းချိုက အရသာရော၊ အနံ့ပါ သင်းပြီ အလွန်ကောင်းမွန်သော ဟင်းချို တစ်ပွဲပါပဲ။ ဒီချက်နည်းလေးကို ၀တ်ရည် အကိုကြီးဆီမှ တောင်းယူပြီ ချက်ပြုတ်ထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ တုံယမ်းဟင်းချိုက ထိုင်းစတိုင် ဟင်းလျာများနှင့်လည်း အလွန်လိုက်ဖက်ပါတယ်။ တုံယမ်းဟင်းချိုကောင်းကောင်း ကြိုက်သူများအတွက် ချက်နည်းကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်…
၁။ ကြက်ခြေထောက် -၁၀ခု (တ၀က်ဝက်ပါ)
၂။ တုံယမ်း (အခဲ) – ၂တုံး
၃။ တုံယမ်း အနှစ် – တ၀က်
၄။ အုန်းနို့ – စားပွဲတင်ဇွန်း ၃ဇွန်း
၅။ ငုန်းဥ -၁၀လုံး (အရင် ပြုတ်ပြီ အခွံနွှာထားပေးပါ)
၁။ ခရမ်းချဉ်သီး – ၃လုံး (အစေ့ထုတ် ၈စိပ်စိပ်ပါ)
၂။ မုန်လာဥနီ – ၂ခု (အ၀ိုင်း ပါးပါးလှီးပါ)
၃။ မျှစ်(အချို) – ၅ခု (အ၀ိုင်း ပါးပါးလှီးပါ)
၄။ ပြောင်းဖူးသေး – ရခု (အစောင်း ပါးပါးလှီးပါ)
၅။ ပဲပြား – ၁တုံး ( အရှည်ပါးပါး လှီးပါ)
၆။ Tofu – ၂ခု ( အ၀ိုင်း လေးများ လှီးပြီ ဆီများများဖြင့် ပြန်ကြော်ထားပေးပါ)
ရ။ သံပရာသီး – ၁လုံး
၈။ နံနံပင် – ၁စည်း ( ပါးပါးလှီးပါ)
၉။ ကြက်သွန်မြိတ် – ၁စည်း (ပါးပါးလှီးပါ)
၁၀။ ပဒယ်ဂေါ – ၁ခု (ပါးပါးအစောင်း လှီးပါ)
၁၁။ ရှမ်းနံနံ – အနည်းငယ် (ပါးပါးလှီးပါ)
၁၂။ ကြက်သွန်ဖြူ – ၃မွှာ (နှုတ်နှုတ်ဆင်းပါ)
၁၃။ ကြက်သွန်နီ – တ၀က် (နှုတ်နှုတ်ဆင်းပါ)
၁၄။ ငရုတ်သီးစိမ်း – ၄ခု ( တ၀က်ဝက်ပါ)
၁။ ငါးငံပြာရည် – စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်း
၃။ ကြက်သားမှုန့် – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၂ဇွန်း
၁။ အရင်ဆုံး ကြက်ခြေထောက်များကို ရေစင်အောင် ဆေးပြီ တ၀က်ပိုင်းလိုက်ပါ။
၂။ ပြီးလျှင် ဒယ်အိုးကြီး တစ်ခုထဲ ရေ ၃၀၀ မီလီ လီတာမျှ ထည့်ပြီ ကြက်ခြေထောက်များ နူးသည်အထိ တည်ထားပေးပါ။
(မှတ်ချက်။ ။ ၀တ်ရည်က ကြက်ပြုတ်ရည် လိုချင်၍ ကြက်ခြေထောက်များကို ထည့်ပြုတ်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ အကယ်၍ တုံယမ်းချက်မှ ကြက်ခြေထောက်များ ထည့်ချက်လျှင်လည်း ရပါသည်)
၃။ ယခု တုံယမ်း ဟင်းချို စချက်လို့ ရပါပြီ။
၄။ တုံယမ်းချက်ရန် ဒယ်ပြားကြီး တစ်ခုထဲသို့ ဆီ(စားပွဲတင်ဇွန်း ၃ဇွန်း)ထည့်ပြီ ကြက်သွန်ဖြူ၊ နီ၊ ပဒယ်ဂေါ၊ ငရုတ်သီးစိမ်းများ ထည့် မိနစ်ဝက်မျှ ဆီသပ်ပေးပါ။
၅။ ပြီးမှ ဟင်းရွက်များဖြစ်သော (မုန်လာဥနီ၊ ပြောင်းဖူးသေး၊ ခရမ်းချဉ်သီး၊မျှစ်) တို့ကို ထည့်ရောမွှေလိုက်ပါ။
၆။ ထို့နောက် ကြက်ခြေထောက်ပြုတ်ထားသော ကြက်ပြုတ်ရည်များနှင့် ကြက်ခြေထောက်များကို ဒယ်ထဲ ဖြည်းဖြည်းခြင်း လောင်းချလိုက်ပါ။
ရ။ အဖုံးအုပ်၍ ၂မိနစ်မျှ ဆူပွက်အောင် တည်ထားပေးပါ။
၈။ ပြီးနောက် တုံးယမ်းအခဲနှင့် တုံယမ်းအနှစ်များကို ထည့်၍ ရောမွှေလိုက်ပါ။
၉။ အရသာ အနေတော်လျှင် ငုန်းဥ၊ ပဲပြား၊ Tofuထည့်လိုက်ပါ။
၁၀။အရသာ အပေါ့အငံ့အတွက် ဆား၊ ကြက်သားမှုန့်၊ ငါးငံပြာရည်၊ သံပရာရည်တို့ကို ထည့်လိုက်ပါ။
၁၁။ နောက်ဆုံးမှ အုန်းနို့ ထည့်မွှေလိုက်ပြီ ကြက်သွန်မြိတ်၊ နံနံပင်၊ ရှမ်းနံနံတို့ အုပ်ပေးပြီ ထိုင်းစတိုင် အရသာရော၊ အနံ့ရော သင်းပျံ့နေသည့် တုံယမ်းဟင်းချိုကို သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ…
Posted in ထိုင်းဟင်းလျာ ချက်ပြုတ်နည်း | 19 Comments	19 Responses
on October 12, 2010 at 5:25 am | Reply nyinyi
ညီမလေး ပဒယ်ကော ဆိုတာ ဘယ်လိုဟာမျိုးလဲ
on October 12, 2010 at 5:32 am | Reply chowutyee
ဟီးဟီး ပဒယ်ကောကို ဘယ်လို ရှင်းပြရမှန်းတော့ မသိဘူး… ပဒယ်ကော မရှိရင် စပါးလင် ထည့်ချက်လည်း ရပါတယ်… အနံ့မွှေးအောင်ပါ…🙂
on October 15, 2010 at 4:56 pm | Reply haymar
ပဒဲကော – http://en.wikipedia.org/wiki/Galangal
on October 12, 2010 at 5:29 am | Reply nyinyi
on October 12, 2010 at 5:33 am | Reply chowutyee
Nyi Nyiရေ ၀က်သားတောက်တောက်ကြော် ချက်နည်း ၀တ်ရည် ရေးထားပါတယ်.. ၀က်သားနေရာမှာ ကြက်သား အစားထိုး ချက်လိုက်ရုံပါပဲ လုပ်စားကြည့်ပါနော်.. တော်တော်စားကောင်းတယ်..
on October 12, 2010 at 7:21 am | Reply nyinyi
on October 12, 2010 at 9:47 am | Reply chowutyee
ဟုတ်ကဲ့ ကိုညီညီ ကော်မှုန့်နဲ့ ပြောင်းဖူးမှုန့်က တူတူပါပဲ… လုပ်စားကြည့်ပါနော်…
on October 12, 2010 at 1:13 pm | Reply ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်)
ကြက်ခြေထောက်ကို ဘယ်လိုလုပ်လုပ် ကြိုက်တယ် လာထားဘဲ
တုံယမ်ကိုလည်း ချဉ်စပ်လေးဆိုတော့ ကြိုက်တယ်..
on October 12, 2010 at 1:36 pm | Reply chowutyee
မချော လုပ်စားကြည့်ပါနော်.. ဒီတုံယမ်းဟင်းက တကယ်စားလို့ ကောင်းတယ်…
on October 13, 2010 at 2:05 am | Reply မခိုင်
အရမ်းကြိုက်တဲ့ ဟင်းတခုပါ ဝတ်ရည်ရေ ..
on October 13, 2010 at 8:31 am | Reply chowutyee
on October 16, 2010 at 3:18 am | Reply chowutyee
on May 14, 2011 at 9:25 am | Reply yin yin
what is the difference between tofu and pae pya? I though that they are same. Pls explain to me..
on May 30, 2011 at 6:37 am | Reply chowutyee
တို့ဟူးနဲ့ ပဲပြားက တူတူပါပဲ။ မတူတာက မြန်မာပဲပြား၊ ဂျပန် ပဲပြား၊ ဆိုပြီ နူညံ့ပြီ စားလို့ ပိုကောင်းတာ ဒီဟင်းနဲ့ ပိုလိုက်ဖက်တာပဲ ကွဲသွားတာပါ။ ဒီဟင်းမှာ ဆိုရင် ပဲပြားဆိုရင် မြန်မာပဲပြားကို ပြောချင်တာပါ။ တို့ဟူးဆိုတာတော့ ဂျပန်ပဲပြား အ၀ါအလုံးလေးတွေကို ဆိုလိုချင်တာပါ.. ကျေးဇူးပါ…
on September 4, 2011 at 7:45 pm | Reply Norvin
ရေက 500 Liter ဆို တော်တော် များမယ်နော်…..
on September 5, 2011 at 7:30 am | Reply chowutyee
မှားရေးထားတယ်။ ၃၀၀ မီလီ လီတာဆိုရင် ရပါပြီ.. ဆော်ရီး..😀
on May 21, 2012 at 3:05 am | Reply aungmin
တုံ့ ယမ်း အခဲ-အနှစ် ကဘယ်လိုဟာမိူးလဲ မသိဘူး ကျေးဇူးပြုပြီး ဓါတ်ပုံလေးနဲ့ တင်ပေးပါ
on July 23, 2014 at 4:07 am | Reply may zon
ဒီဟင်းလည်း လိုက်ချက်ကြည့်ပြီးတော့ အီကြာကွေးအစာသွပ်တာ သိချင်လို့ပါ..